Medical Writings for Over 18: Minipill ကိုယ်ဝန်တား အသေးစား ဆေးပြား
Tue, Jul 3, 2012 at 4:09 PM
I am 39 years old married woman and have 4½ years old son. My husband went abroad and he will come back near future. I do not want to get another child so I have decided to take birth control pills. Before3months ago, I took Marvelon one month and Microgynon one month for testing which medicine is good for me. Both of them are not perfect for me as I felt fatigue the whole day and also high blood pressure. Now, I change the Exluton pill. This is good for me; I felt there is no side effect because of this. So, I choose to take Exluton. I've heard that Exluton is for breast feeding woman. So, I want to know that is it alright to take Exluton even though I am not breastfeeding. And will it give same protection like Marvelon. I took this pill exact time every day, between7to 8 PM.
Excluton ကိုယ်ဝန်တားဆေးထဲမှာ Lynoestrenol 0.5 mg ပါတယ်။ Progestin-only birth control pill လို့လဲခေါ်တယ်။ Combination birth control pills ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲတားဆေးနဲ့ မတူတာက ဒီထဲမှာ Estrogen (အီစထိုဂျင်) မပါဘူး။ Progestin (ပရိုဂျက်စတင်) ပါတာကလဲ နည်းတယ်။ 1. Very-low-dose progestogen-only ဟော်မုန်း အနည်းဆုံးပါတဲ့ အမျိုးအစားက အရေပြားအောက်ထားရတဲ့ Norplant Subdermal implants, Jadelle (Levonorgestrel implants)၊ သားအိမ်ထဲထည့်တားရတဲ့ Intrauterine systems (Progestasert, Mirena) တွေနဲ့ သဘောချင်းတူတယ်။ မ-မျိုးဥ ထွက်တာကို ၅ဝ% သာ တားနိုင်တယ်။ သားအိမ်အဝ အချွဲကို စေးပျစ်တာကိုသာ ဖြစ်စေတယ်။
2. Intermediate-dose progestogen-only (Cerazette) ဟော်မုန်း အသင့်သာပါတဲ့ အမျိုးအစားက အရေပြား အောက်ထားရတဲ့ Nexplanon Subdermal implant နဲ့ သဘောချင်းတူတယ်။ မ-မျိုးဥထွက်တာကို ၉၇-၉၉% တားနိုင်တယ်။ သားအိမ်အဝ အချွဲကို စေးပျစ်စေတာလဲ ဖြစ်စေတယ်။
3. High-dose progestogen-only contraceptives ဟော်မုန်းပါတာများတဲ့ အမျိုးအစားက Depo-Provera, Noristerat တာေးဆး-ထိုးဆေးတွေနဲ့ သဘောချင်းတူတယ်။ သားအိမ်ဝက ချွဲကို စေးပျစ်စေတယ်။ သားအိမ် အတွင်းဆုံးအလွှာကို ပါးလျစေတာ၊ မ-မျိုးဥထွက်မှာကိုတားတာ အလုပ် ၃ မျိုးလုံးပါ ဖြစ်စေတယ်။
• ရာသီစဆင်းတဲ့ရက်ကနေစပြီး တနေ့ ၁ ပြားသောက်ပါ။
• နေ့တိုင်း သောက်နေကျအချိန်မှာ အချိန်တူသောက်ပါ။
• ဆေးကပ်တခု ကုန်ရင် နောက်ကပ်သစ်တခု စသောက်ပါ။ တချို့မှာ (၃၅) ပြားပါတယ်။ ရာသီက ၂ လမှ တခါသာ လာမယ်။
• ကိုယ်ဝန်ပျက်-ဖျက်သူတွေလဲ သွေးဆင်းတဲ့ ပဌမရက်နေ့မှာ ဆေးပြားစသောက်ပါ။
Benefits အကျိုးရှိတာတွေ -
• ကလေးနို့တိုက်နေချိန်လဲ သောက်နိုင်တယ်။ • ဆေးဖြတ်တာနဲ့ ကလေးပြန်ရဘို့ လွယ်တယ်။
• ရာသီနဲ့ဆက်စပ်နေမဲ့ Sickle cell disease ရောဂါနဲ့ Dermatitis ရောဂါတွေကို ကုသရာမှာ သုံးနိုင်တယ်။
• သွေးဆင်နည်းလို့ သွေးအားနည်းတာ သက်သာမယ်။
• ဆေးလိပ်သောက်သူ၊ အသက် ၃၅ နှစ်ကျော်သူတွေလဲ သောက်နိုင်တယ်။ • နှလုံးရောဂါရှိသူတွေအတွက် စိတ်ချနိုင်တယ်။ သွေးခဲတာ နည်းတယ်။ PID တင်ပါးဆုံတွင်း အင်္ဂါတွေရောင်တဲ့ ရောဂါကို အဖြစ်နည်းစေ တာတော့ ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲတားဆေးနဲ့ အတူတူဘဲ။ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ -
• ဆေးစသောက်ကာစ အစောပိုင်းလတွေမှာ ရာသီမမှန်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ တချို့ စွန်းယုံသာလာတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ တချို့တော့ များတယ်။ • ရာသီမလာဘဲနေတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ တလအထိ နောက်ကျသွားရင် ဆရာဝန်ပြပါ။
• အသားဝါဖြစ်လာရင် ဆရာဝန်ပြပါ။
• ဝက်ခြံထွက်မယ်၊ ပျို့ချင်မယ်၊ ခေါင်းကိုက်မယ်၊ ရင်သားတင်း-နာမယ်၊ ဒါတွေကလဲ စောစောပိုင်းလတွေမှာသာ ဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ • လူက ဝလာနိုင်တယ်။ ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲဆေးလောက် ကိုယ်အလေးချိန် မတက်ဘူး။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဆက်မတိုးတော့ဘူး။
• ဆီးချိုရှိနေသူတွေ သတိထားပေးရမယ်။ ဆီးချိုကိ်ု အထိန်းရခက်နိုင်တယ်။
• ကိုယ်ရောင်တာ ဖြစ်စေနိုင်လို့ နှလုံးရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ အတက်ရောဂါ၊ (မိုင်ဂရင်း) ခေါင်းမူး-ခေါင်းကိုက်ရောဂါ၊ သွေးတိုး၊ ပန်းနာရောဂါရှိသူတွေက သတိထားသောက်ရမယ်။
• ဆေးသောက်ကာစ ပဌမတနှစ်မှာ ၃ လတကြိမ် ဆေးစစ်သင့်တယ်။ နောက်ပိုင်း ၆ လတခါစစ်သင့်တယ်။ • လိင်စိတ်နည်း၊ စိတ်မူပြောင်း၊ စိတ်ဓါတ်ကျ၊
• ၁ဝဝ မှာ ၁ ယောက်ကနေ ၁၃ ယောက်အထိ ပဌမ ၁ နှစ်အတွင်းမှာ ကိုယ်ဝန်ရတာတွေ့ရတယ်။ ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲထက် ဒီလိုဖြစ်တာ ပိုများတယ်။ • တကယ်လို့ ကိုယ်ဝန်ရလာရင် သိဘို့ခက်တတ်တယ်။ ကံမကောင်းရင် သားအိမ်ပြင်ပမှာ သန္ဓေတည်နိုင်တယ်။
• Functional ovarian cysts မျိုးဥအိမ် အကျိတ် ဖြစ်နိုင်တယ်။ မခွဲဘဲလဲ ပျောက်နိုင်တယ်။
• STDs လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါတွေကို မကာကွယ်နိုင်ဘူး။
Efficacy and effectiveness ဘယ်လောက်ထိရောက်သလဲ
• (သီအိုရီ) အရပြောရရင် ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲနဲ့ အတူတူထိရောက်တယ်။ • အချိန်တူသောက်ဘို့၊ ရက်မပျက်ဘို့ ပိုလိုတယ်။
• ကလေး နို့တိုက်နေသူတွေမှာ ၆ လအတွင်းသောက်ရင် ၁ဝဝ% ကိုယ်ဝန်မရဘူး။
• ကလေး နို့မတိုက်နေသူတွေမှာ ၉၉့၅% ကိုယ်ဝန်မရဘူး။ ဆေး ၂ မျိုးတွဲ ၉၉့၇-၉၉့၉% မရစေဘူး။
• ဆေးတရက်ပျက်လို့ ကိုယ်ဝန်ရလမ်းက ၂ မျိုးတွဲထက်ပိုမယ်။
• ကလေးမွေးထားပြီး ကလေးကိုလဲ နို့အပြည့်အဝတိုက်နေမယ် ရာသီလဲ ပြန်မပေါ်သေးရင် ၆ လအထိ၊ ကလေး မွေးထားပြီး ကလေးကို နို့မတိုက်ရင် ၂၁ ရက်အထိ ကိုယ်ဝန်ရလမ်း အလွန်နည်းတယ်။
• ရာသီတလ သွေးစဆင်းတဲ့ရက်ကနေ စသောက်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ • ဆေးသောက်အပြီး ၄-၂၂ နာရီအတွင်းမှာ သားအိမ်အဝအချွဲ စေးပျစ်တာက အများဆုံးအချိန် ဖြစ်လို့ မနက်ခင်း ဆေးသောက်ပြီး ညမှာအတူနေတာ အကောင်းဆုံး အစီအစဉ်ဖြစ်တယ်။ • ရာသီစလာတဲ့ရက်မှာ စသောက်ပေမဲ့ ရာနှုန်းပြည့် သေခြာအောင် ဆေးစသောက်ပြီးနောက် ၄၈ နာရီအတွင်း အတူနေရင် (ကွန်ဒွမ်) သုံးပါ။ • ဆေးသောက်ချိန်ထက် ၃ နာရီ နောက်ကျသွားရင် ၄၈ နာရီအတွင်း အတူမနေပါနဲ့။ နေဖြစ်ရင် အရေးပေါ်တားဆေး သောက်ပါ။ • တရက်နောက်ကျသွားရင် နောက်ရက်မှာ ဆေး ၂ လုံးတခါတည်း သောက်ပါ။ ၄၈ နာရီ အတူမနေပါနဲ့။ ဒါမှမဟုတ် (ကွန်ဒွမ်) သုံးပါ။ • ဆေးတကပ်ကုန်တာနဲ့ ရာသီ လာလာ-မလာလာ၊ နောက်ဆေးတကပ် ဆက်သောက်ပါ။ အတူမနေဖြစ်သေးလဲ ဆက်သောက်ပါ။ • ၁-၇ ရက်အထိ ဆေးသောက်တာ နောက်ကျသွားရင် (ကွန်ဒွမ်) သုံးပါ။ • ဆေးသောက်ပြီး ၂ နာရီအတွင်း အန်ရင် နောက် ၁ လုံးသောက်ပါ။
• ဟော်မုန်း ၂ မျိးတွဲဆေးကနေ ဒီအမျိုးအစားကို ပြောင်းချင်ရင် (ဟော်မုန်းပါ) အရင်သောက်ရတဲ့ဆေးပြား သောက်နေတုံးမှာ ချက်ချင်း ပြောင်းသောက်ပါ။ • St. John's Wort တိုင်းရင်းဆေး၊ Rifampin တီဘီဆေး၊ Griseofulvin ပွေး-မှိုဆေး၊ Phenobarbitone, Phenytoin, Primidone, Carbamazepine, Dichloralphenazone အတက်သက်သာဆေး၊ HIV ဆေးတချို့၊ ပဋ္ဋိဇီဝဆေးတချို့တွေနဲ့ တွဲမသောက်သင့်ပါ။
• ကလေးလိုချင်လို့ ဆေးရပ်ချင်ရင် ဆေးကပ်မကုန်သေးလဲ ရပ်လိုက်နိုင်တယ်။ ၂၄ နာရီအတွင်း ကိုယ်ဝန် ရနိုင်တယ်လို့ ထင်မှတ်ထားရမယ်။ • ရက်လဲမှတ်လို့ လွယ်အောင် ရာသီမှန်စေပြီးမှ ကလေးယူသင့်တယ်။ ဆေးရပ်အပြီး ကြားထဲမှာ (ကွန်ဒွမ်) သုံးပါ။
• ဆေးဖြတ်ပြီး ကိုယ်ဝန်ရချင်ရင် Folic acid ဖေါလစ်-အက်စစ်ဆေးကို တလကြိုသောက်နိုင်ရင် ပိုကောင်းတယ်။
Excluton ဆေးကို ကိုယ်ဝန်တားတာအပြင် တခြားနေရာတွေမှာလဲ သုံးနိုင်တယ်။
1. Polymenorrhoea ရာသီ ခဏခဏဆင်းတာအတွက် တနေ့5mg ကို ၁၄ ရက်မြောက် နဲ့ ၂၅ ရက်မြောက် နေ့တွေမှာ သောက်ပါ။ 2. Menorrhagia ရာသီဆင်း များတာအတွက် တနေ့ 10 mg နဲ့ ၁ဝ ရက်၊ ၃ လ ဆက်တိုက်။ ဒါမှမဟုတ် တနေ့5mg နဲ့ ၁၄ ရက်မြောက် နဲ့ ၂၅ ရက်မြောက်နေ့တွေမှာ သောက်ပါ။ 3. Endometriosis သားအိမ်ရောဂါအတွက် တနေ့ 5-10 mg နဲ့ ၆ လသောက်ပါ။ 4. Dysmenorrhoea ရာသီလာတုံးနာတာအတွက် တနေ့5mg နဲ့ ၁၅ ရက်မြောက်နေ့က စသောက်ပါ။ 5. Postponement of menstruation ရာသီမလာဘဲနေအောင် တနေ့5mg နဲ့ ရာသီမလာခင် ၂ ပတ် ကြိုတင် သောက်။ ဒိနောက်မှာ တနေ့ 10-15 mg သောက်ပါ။
6. Endometrial hyperplasia သားအိမ်ရောဂါအတွက် တနေ့ 2.5-5 mg နဲ့ ၁၂ နဲ့ ၁၅ ရက်မြောက်နေ့တွေမှာ သောက်ပါ။
ဒီလို မိန်းကလေး၊ အမျိုးသမီးတွေမှာ မသောက်သင့်ပါ -
• အပျိုဖြစ်ကာစ ရာသီရက် မမှန်သေးသူတွေ မသောက်သင့်ဘူး။
• Thrombophlebitis, Thromboembolic processes သွေးပြန်ကြောရောဂါရှိသူ၊
• မွေးလမ်းကနေ ဘာလို့မှန်းမသိဘဲ သွေးဆင်းနေသူ၊
• Breast cancer ရင်သား-ကင်ဆာရှိနေသူ၊ ရှိဘူးသူ။